नेपालमा आर्थिक कुटनीतिको चर्चा हुने गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । तर त्यसबाट खासै उपलब्धी भने केहि भएको देखिदैन । यसको अर्थ नेपालमा आर्थिक कुटनीति केवल चर्चाको लागि चर्चा मात्र गर्ने गरिएको छ । यसलाई...
ए नानी कहाँ जाने ? म पुर्याइ दिउ ? कस्तो नबुझेको हो ? हामी पनि मान्छे नै हौ नि ! यसो नजर लगाउदा राम्रै हुन्छ । भन्दै मोटरसाइकल अघि बढ्थ्यो । मोटरसाइकल हिड्यो कि : म पुर्याई दिउ ? कता जाने ? ..... आदि...
सिद्धान्तत सामान्तवादको समाप्ती सँगै पुँजीवादको विकास हुन्छ । नेपालको सवालमा २४० बर्ष देखी राजगरेको सामान्तवादको संरक्षक संस्था राजतन्त्र समाप्त हुँदा पनि पुँजीवादको विकास हुन सकेन । प्रजातन्त्र प्राप...
सवारी दुर्घटनाको न्यूनिकरण कसरी गर्ने ?
माइक्रोबस यात्रा गर्दाको कहाली लाग्दो त्यो रात सम्झिंदा अहिले पनि मेरो मन सिरिंग हुने गर्दछ । सोह्र वर्ष अगाडीको कुरा हो, म नारायणघाटबाट काठमाडौं फर्कनको लागि एउटा माइक्रोबस पक्रें । साँझ छ बजे हिड्ने...
नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ र नेकपाको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ । प्रायः विरोध, आलोचनालाई सजिलै ग्रहण गर्ने खालको जनमत भएको नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक पक...
किन भइरहेको छ सवारी दुर्घटना ?
सवारी दुर्घटनाको विषयमा अध्ययन गरौ त ? प्राय जसो कम उमेरका चालक,मदिरा,साथमा किशोरीहरू या किशोरीहरू प्रतिको अनावश्यक लगाव प्रतिको चासो रहेकै कारण भएका देखिन्छन । केही समय अघि झापाको विर्तामोडमा सड...
पुँजी बजार उद्योग, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न वा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक हुने लगानीका लागि साधन परिचालन गर्ने एउटा महत्व पूर्ण माध्यम हो। उद्योग, व्यापार व्यवसाय सु...
गत मंसिर २९ गते देखी सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक चलिरहेको छ । सामाजिक संञ्जाल, मिडिया र पत्रपत्रिकाहरुमा नेकपा बैठक भित्र व्यक्त तीतो, नमिठो र खल्लो कुराले सर्वसाधारण मानिसको ध्यान खिच्न सफल भए...
गत आइतबार भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस २०७५ भव्य रुपमा मनाइयो । भ्रष्टाचार मानव समाजको अभिन्न अङ्ग होइन तर पनि हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गरेको मान्ने आधार फेला पर्दैन । अख्तियार ...
दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार बनेको थियो । यो सरकारलाई पाँच बर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैनथ्यो । सरकारले ढुक्क भएर बिकासको काम गर्ने वातावरण बनेको थियो । जनता सन्तुष्ट हुनेगरी काम गरेको खण्डमा पाँच बर्...
पुर्व प्रधानमन्त्री देउवाले चौथो पटक सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गरेसँगै ज्योतिषको हवाला दिंदै आफु सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बताए । ज्योतिष माथी भर नपर्ने जनता र काम प्रती आफ्नो अटुट आस्था र विश्वास ...
देश समृद्धिमय छ । स्थानिय , प्रदेश र केन्द्र सरकारमा नेकपा छ । जनता छन । घटदो आषा छ । उमंग हराउँदै छ । करिब सात लाख कार्यकर्ता परिचय खोज्दै छन । स्थायी समिती आफ्नो अस्तित्व खोज्न अल्छी मान्दै छ । केन्...
केही दिन यता सामाजिक सञ्जालहरुमा केही सरकारी निर्णयहरुका विषयमा बहस, आलोचना र निन्दा भईरहेको छ । कञ्चनपुर निवासी नेपालकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि अपर...
बिक्रम सम्वत २००६ साल देखी जनतालाई देखाएको सपना साकार मार्ने संसदिय अंकगणित सहित सिंहदरवारको कुर्सी प्राप्त गर्न सफल वाम सरकार नौं महिना पुरा गर्दैछ । अत्यन्त ठुलो जनादेशको साथ जनताको अपेक्षा पुरा गर्...
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। देशमा राजनीतिक स्थिरता बहाल भएको र पर्याप्त वर्षाको कारण यस वर्ष रेकर्ड स्तरमा धान उत्पादन हुने देखिएकाले सरकारको य...
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र र योजना निर्माण विषयका एकथरी जानकारहरु भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसंग सपना छ तर उनिसँग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट परिणाम निका...
बारुदी सुरुङ अविभेदकारी हतियार हो भन्ने कुरा नेपालका विभिन्न भागमा अंगभंग भएर जीवन विताउन बाध्य मानिसहरुको स्थितिलाई हेर्दा पुग्छ । उनीहरु नेपालको विभिन्न भागहरुमा दुःख कष्ट झेल्दै जीवन विताईरहेका छन्...
विमानस्थल , समुन्द्री पुल र समृद्धि !
अस्थिरता , अराजकता र बैदेशिक हस्तक्षेपको दलदलमा फसिरहेको समय मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारा आफैमा कर्णप्रिय हुने नै भयो । मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले साधारण तर्फको बजेट जति भए पनि भ्याउने तर पुँजीगत खर्च...
नेपाली कम्युनिष्टको यात्रा : सामन्तवाद देखी सामन्तवाद सम्म !
वामहरुको चुनाबी नारामा लोभिंदै मतादेश र जनादेश मार्फत जनताले तीन वटै सरकार नेकपाको झोलीमा राखी दिएका छन । जनता मार्फत प्राप्त अथाह शक्तीको कारण स्थीरता , विकास र समृद्धिको ज्वरोमा रन्थनिएको सरकार जनत...
यतिखेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दुई घटनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई तरंगित पारेको छ। यी घटनाले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो अनिश्चितता पनि निम्त्याएको छ। ती दुईमध्ये एउटा हो अमेरिकाले विशेषगरी चीनवि...